Wararka - Falanqaynta fashilka iyo xalka mashiinka dejiyaha koronto dhaliyaha ma bilaabi karo
Waxaa jira sababo kala duwan oo aan loo bilaabi karin mashiinka naaftada genset. Inta badan afarta qodob ee soo socda:
A.Start danab batteriga waa yar yahay, awoodda dhabta ah kuma filna (waxay u muujineysaa danab sida danab dalwaddii)
B.Start fiilada batteriga iyo qaladka fiilooyinka mootada
Gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida;
D.Cummins, Katebite, Wilson iyo noocyo kale oo Shiinaha mishiinka naaftada ah oo bilaabaya xiriiriyaha cillad;
Ediesel matoor mashiinka bilawga ah "la dirir ilig."
A. Halbeeg halbeega batteriga iyo haddii xeedho DC wax soo saarkeedu yahay mid caadi ah oo leh mitir mitir, hubi heerka dareeraha ee baytariyada aashitada leedhka, ku dar biyo nadiif ah waqtigooda.
B. Ka qaadida mootada, dacwad oogayaasha xiriirada biilalka elektromagnetic, haddii xiriirku gubto, beddel qalabka iswada;
E. Ku hagaajinta furitaanka bannaanka mishiinka dabka mishiinka Diesel meel wanaagsan oo dhexda ah
2. Nidaamka Shidaalka
Falanqaynta Fashilka: Hawada ayaa ku daadanaysa nidaamka shidaalka
Habka looga sii daayo hawo tuubada saliida cadaadiska hooseysa: Ka fur furka hawo saarida mashiinka shidaalka lagu shubo, bamka gacanta lagu riixo bamka wareejinta saliida ee firfircoon, ilaa saliida naaftada ku daadato bilaa hawo hawo ah, ka dib adkee furida iyo bamka gacanta. Habka ka saarida hawo tuubada saliida cadaadiska sare leh: kala fur xiraha tuubada cadaadiska sare ee bamka saliida lagu shido mid mid, u bilow mashiinka ilaa inta saliida ay ka soo baxeyso dhamaan silsilada, ka dibna adkee isku xiraha tuubada cadaadiska sare leh. Habka soo saarista hawada ee mashiinka Cummins waa ka duwan yahay mishiinka kale naaftada, waxay ku tiirsan tahay bilowga mishiinka.
3. Ku filnayn cadaadiska istaroogga oo riixa
(1) Daadinta waalka
(2) Bistoolad garaac xad-dhaaf ah
A. Ka qaad daboolka silsiladda, madaxa silsiladda, hubi xaaladda shaabadda ee nadiifinta waalka, guga waalka, tuubada tuubada iyo kursiga waalka, haddii khadadka xirmidda waalka la joojiyo, isticmaal waalka ciida shiidi kara si joogto ah oo siman;
B. Fiska ka saar, beddel giraanta bistoolada
4, Deegaanka heerkulkiisu hooseeyo
(1) Cilad kululeeyaha
(2) Diesel waa mid aad u qaro weyn
A. Ka qaad daboolka dhinaca kuleyliyaha, hubi khadka soo gelinta AC si aad u aragto haddii danabku caadi yahay, haddii caadi yahay, kululeeyaha uu xun yahay, beddel kuleyliyaha
B. Saami ahaan loogu daro nafaqada naaftada, ama dooro Lambar 10, Lambar 20, No 35
Falanqaynta fashilka iyo xalka eng ...